Dowladda Mareykanka oo Sudan Ka Qaadday cuna qabeteyntii saarneed muddo 20 sana ah.
Sunday January 15, 2017 - 11:30:35 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha waqtigiisu sii dhammaanayo ee dalka Mareykanka Brack Obama ayaa ku dhawaaqay in cuna qabateyntii saarneed laga qaaday wadanka Suudaan ee dhaca bariga qaaradda Afrika.
Obama ayaa sheegay in xukuumadda dabadhilifka Suudaan laga qaaday dhammaan cunaqabateyntii ay dowladda Mareykanka kusoo rogtay kadib markii ay ogolaatay in ay qeyb ka noqotay la dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in xukuumadda Suudaan ee uu hoggaamiyo Cumar Xasan Al Bashiir ay qaadday tallaabooyin ad-adag oo ay kula dagaallamayso jamaacaadka jihaadka islamarkaana laamaheeda ammaanka ay Mareykanka kala shaqeeyeen sidii loosoo xiri lahaa dad muslimiin ah oo Mareykanku doon doonayay.
Obama ayaa ugu baaqay mas’uuliyiinta dowladiisa in ay fasaxaan dhammaan lacagihii xukuumadda dabadhilifka Suudaan laga xayiray lacagahaas oo Bankiyada mareykanka ku xanibnaa muddo 20 sanadood ka badan.
Obama ayaa sidoo kale sheegay in Nidaamka kajira magaalada Khurduum oo daacadnimo umuujiyay mareykanka islamarkaana uu si adag uga hortagay wax uu ugu yeeray faafinta xagjirnimada oo uu ula jeedo in suudaan ay ladagaalantay in towxiidka iyo jihaadka ay ku dhax faafaan bulshada suudaan.
sanaddii 1997 ayay dowladda Mareykanka cunaqabateymo dhan walba ah kusoo rogtay dalka Suudaan balse sanaddii 2006 ayaa cunabateymahaasi lasii adkeeyay markii ciidanka Suudaan lagu eedeeyay in xasuuq ay ka geysteen gobolka Daarfuur ee koonfurta Suudaan.
Nidaamka Faasidka ah ee Suudaan kajira ayaa larumeysanyahay in uu usii dhawaanayo mareykanka isagoo hadda qeyb ka ah xamlada saliibiga ah ee caalamka islaamka lagu qaaday.
warbixino horay usoo baxay ayaa sheegayay in sirdoonada Suudaan iyo CIA-da Mareykanka ay xiriir wanaagsan yeesheen iyagoo iska kaashada soo xiridda saraakiil katirsanaa Mujaahidiinta alqaacidda oo Bariga Afrika ka howlgelayay.
Sanaddii 2015 dhammaadkeedi ayay dowladda Suudaan ku biirtay isbahaysigii la magac baxay ‘duufaanta go’aanka’ oo ay hoggaaminayaan dowladaha imaaraadka carabta iyo Sacuudiga waana isbahaysi saaxiib la ah dowladda Mareykanka.